ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: အရူးလွယ်အိတ်
ဒီပိုစ်လေးက ပျော်စရာပဲ..း)
ပိုက်ဆံအိတ်လေးက ပန်းရောင်၊ နှုတ်ခမ်းနီဗူးလည်း ရှိတယ်။ ပြီးတော့ စာအုပ်ကလည်း ပန်းနုရောင်လေး၊ မျက်နှာကိုလည်း ပေါင်ဒါ လိမ်းသေးတယ် ဆိုတော့... အင်း.... စဉ်းစားစရာပဲ (ခင်လို့ စနောက်သွားပါတယ် ကိုမျိုးရေ... စိတ်မချိုးနဲ့နော် ခိခိး)
အဲ.... ဒီတစ်ခါတော့ လွယ်မင်ထင်တာပဲ ငါ့အိတ်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြလိုက်ရင် ပြီးမယ်.. လာမယ် မြောင်မျိုးရေ ငါ အခုတစ်လော အသက်ရှူမှားလောက်အောင် အလုပ်များချင်ယောင်ဆောင် အဲ... အလုပ်များနေလို့... ခဏတော့ သည်းခံပေး...
နင်နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးတာတောင် မနေ့က သိရမှာ ဒါပေမယ့် အချိန်မရ သေးလို့ အခုမှ လာတယ်.။
မောင်ပန်း အယ် မောင်မျိုး ပြည်သူဝိုင်းတွေရဲထားပြီး အိတ်ထဲရှိတာ အကုန်ချပြပြီး ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက မဟုတ်တရုတ်တွေ ထုတ်လိုက်စမ်းး)))))
အိတ်ထဲမှာ နှုတ်ခမ်းနီလဲပါတယ် ပေါင်ဒါလဲလိမ်းတယ် ပန်းရောင်လဲ သုံးတယ် ... ဟုတ်တော့နေပါပြီ ပန်းရောင်မောင်မျိုးရေ ...
ပန်းရောင် .. ??
ခရမ်းရောင်တွေ ပဲ မြင်နေသလိုပဲ ..း))
နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးပြီးမှတော့ ဘာလို့ အိတ်ထဲမှာ ရှောက်သီးဆေးပြားထုပ်ကို မတွေ့ရတာလဲ။ သြော်. . . ရောင်းအားကောင်းလို့ အနောက်မှာ ကျောပိုးအိတ်နဲ့ သယ်နေရတာလား :P
မယုံဘူး ညီမတွေ ဟာတဲ့ ဘာဖြစ်လည်း
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့ ဟဟား :)
သူများတွေပြောသွားသလိုဘဲ ပြောချင်ပါတယ် နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ပေါင်ဒါနဲ့ ပန်းရောင်နဲ့
ဟိဟိ စိတ်မဆိုးနဲ့ စာဖတ်ပြီးပျော်လို့နောက်တာ
မောင်မျိုးအိတ်ထဲက ပစ္စည်းတွေက လှတ ပတလေးတွေတော့း)
ဟိုး စောစောပိုင်းတုန်းက (အမတို့ ဘလော့ဂ်စမရေးခင်က) ဘလော့ဂ်ဂါ ညီအမတွေ အိတ်ထဲမှာ ဘာရှိသလဲလို့ ပြောပြကြတဲ့ တက်ဂ်ပိုစ့်လေးတွေကို သတိရသွားတယ်...
မောင်မျိုးအိတ်က ပစ္စည်းလေးတွေက ရှယ်ပဲ...း))
စာရေးဆရာတို့များ... လွယ်အိတ်လေးဖွင့်ချလိုက်တာတောင် အက်ဆေး ကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင်ရေးတတ်တယ်။ ဒါနဲ့ မင်းဖွင့်ချလိုက်တုန်းက ပုတ်သင်ညိုတွေထွက်ကျလာတာမြင်ပါတယ်။ ဘယ်မှာသွားဖွက်ထားတာလဲကွ။
Sopra No said...
မောင်မျိုး... ဂျောင်ထိုးထားတာ ပုတ်သင်ညို ဆိုပါလား...ဟီးဟိးး) )
ပန်းရောင်ကြိုက်တဲ့ မင်းသားလို့တော့ မထင်တော့ပါဘူး.. အလကားရလို့ သုံးတယ်ဆိုတာ သိသွားလို့...း)
အင်း ရှိတာတွေတော့ ထုတ်ကြွားနေပြီ...
အရူးလွယ်အိတ်နဲ့ ကော်မန့်တွေဖတ်ပြီး တခွီးခွင်္ီးရယ်သွားသည်.။
ဘယ်သူကများ ရိုက်စစ်ပါလိမ့် ... ????? :P
သိသွားပြီ ခုတော့ နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ ကြောင် ဘာတွေ ဆောင်ထားသလဲလို့ :P